Ku saabsan sharciga waqtiyada shaqada - Arbetsmiljöverket
Ku saabsan sharciga waqtiyada shaqada
Sharciga waqtiyada shaqada
Sharciga waqtiyada shaqada waxaa ku qoran xeerarka ku saabsan inta qofka shaqaalaha ahi uu shaqayn karo afariyolabaatankii saac, toddobaadkii iyo sannadkii. Waxaa kaloo ku qoran waqtiga heeganka, xaqa loo leeyahay biririfta iyo xeerka ka jira nasashada habeenkii. Tusaale ahaan, waa ay dhammaan shaqaaluhu xaq u leeyihiin ugu yaraan 11 saac oo isku xigta oo nasasho ah afariyolabaatankii saacba. Waxaana lagu magacaabaa nasashada afariyolabaatankii saac.
Mabda’ ahaan wuxuu sharciga waqtiyada shaqadu khuseeyaa dhammaan shaqooyinka ka jira dalka Iswiidan . Waxaa jira shaqooyin aan xeerkaas lagu maamulayn oo aad hoos ka akhrisan karto. Mid muhiim ah oo xeerkaas ka tirsan waxa weeye qodobka 12 ee sharciga waqtiyada shaqada oo qoraya in uu shaqa-bixiyuhu u gudbin karo warbixin ku saabsan wax-ka-beddelka waqtiyada shaqada qofka shaqaalaha ah ugu yaraan labo toddobaad ka hor, laakiin taas ma khuseyso qofka shaqada loo diray.
Waxaa jira qaybo shaqo oo wax ku maamula waqtiyo shaqo oo gaar ah iyo xeerar u gaar ah. Shaqaalaha lagu maamulana waxaa ka mid ah shaqaalaha gaadiidka cirka ee shicibka ah, shaqooyinka gaadiidka dhulka iyo gaadiidka tareenada ee caalamiga ah.
Sharciga waqtiyada shaqada waxaa tirtiri karaa heshiis wadajir ah. Heshiiska wadajirka ah oo sharciga gebi ahaan ama qayb ahaan beddelaya.
Wakaaladda bey’adda shaqadu waxay hubisaa in sharciga la raacay
Wakaaladda bey’adda shaqada ayaa kor ka ilaalisa sharciga oo oggolaata in aan lagu dhaqmin qaybo ka mid ah sharciga. Haddii aad dareento in cidda aad u shaqaysaa ay jebisay ku dhaqanka sharciga waqtiyada shaqada, waxaad toos u la xiriireysaa Wakaaladda bey’adda shaqada.
Haddii waqtiyada shaqada lagu dejiyey heshiiska aysan wakaaladda bey’adda shaqadu korka kala socon, waxay kolka ururada shaqabixiyayaasha iyo ururada shaqaaluhu ku heshiinayaan qaybaha sharciga oo aan lagu dhaqmayn.
Haddii aad tahay qof shaqo loo soo diray, waxaa lagugu maamulayaa sharciga ku saabsan fasax mushahar leh. Waxaase jira sababo sharciga ka baxsan oo maamulo qofka dibedda shaqada loogu soo diray oo ay ka mid tahay shaqada rakibidda qalab ama shaqo lagu qabtay waqti ka yar siddeed maalmood. Haddii ay tahay shaqo sannadkii ugu dambeeyey qofka kale hore loogu soo diray, waxaa markaa waqtigaa lagu xisaabinayaa waqtiga shaqada dibedda laguugu soo diray.
Xeerka ka reebidda ee siddeda maalmood ah kuma saabsana haddii shaqadu tahay mid dhismo la bilaabay, la taagay, la dayactiray ama la burburiyey. Waxaa markaa la raacayaa xeerarka ku saabsan fasaxa mushaharka leh oo laga soo bilaabay maalinta ugu horreysa ee shaqada dibedda laguugu soo diray.
Shaqooyin waqti gaaban
Waxaa jira fursado lagu baabi’tin karo xaqa fasaxa haddii aad dalka Iswiidan ka shaqayso muddo ugu badnaan saddex bilood ah. Waxaad kolkaa xaq u leedahay gunnada fasaxa.
Haddii aad xaq u lahayn fasax sababaha kor ku qoran awgood ama aad ka tagtay shaqada cidda aad u shaqayso adigoo aan lagu siin mushaharka fasaxa, waxaad kolkaa xaq u leedahay in lagu siiyo mushahar dheeraad ah oo laguugu gudo mushaharkii fasaxa oo ku gefay (waxaana lagu magacaabaa gunnada fasaxa).
Halkaan ka akhriso sharciga fasaxa shaqada
Haddii shaqo dibedda laguugu soo diro oo aadan helin shuruudaha shaqada oo sharciyan xaqa u leedahay, waxaad kolkaa la xiriireysaa maxkamad iswiidhish ah.